Dhismaha Bulshada | New City School
Kulanka subaxi waa qaab maalin walba la sameeyo oo loogu talagalay in lagu dhiso bulshada ee fasalka. Waa waqti la isku salaamo, la iska wareeysto xaaladaha noloshooda, ay wada ciyaaraan oo na loo sheego warbixinta muhiimka ah, caruurtana ay u diyaargaroobaan maalintii waxbarashada bulshada iyo tacliinta. Kulanka Subaxdii, caruurta waxeey kubartaan xirfadaha bulshada sida dayactirka diiradda, weydiinta su’aalahaqeyma leh, bixinta fikradooda, dhagaysiga, salaanta gacanta hab saaxiibtinimo, sheegayay fikradaha, iyo fahanka booskooda bulshada dhexdeeda.
Rajada iyo Riyooyinka
Sanada walbo bilaawgiisa shaqaalaha, carruurta, iyo waalidiinta waxee cadeenaayaan waxee rajeenaayaan sanad dugsiyeedka . Macalimiintu waxay ka fiirsadaan goolasha horumarinta xirfadeed. Waxa kale oo carruurta la wadaagaan rajadooda oo inuu fasallada nabad iyo wax soo saar leyihiin. Caruurta waxee sheegaayaan, ee tusinaayaan, iyo ay la wadaagaayaan goolashoda tacliinta iyo bulshada. Intaa waxaa dheer, waalidiinta iyo xubnaha qoyska waxaa laga codsanayaa inay muujiyaan waxee u rajeenaayaan carruurtooda. Fasal kasto wuu dabbaaldegga rajadooda iyo si qurux badan aa loo soo bandhigi.
Kulanka Dhugsiga Dhan
Si loo dhiso bulshada dugsiga dhan, carruurta New City waxee leeyihiin fursad ay ka qaybgalaan kulanka dugsiga dhan. 2-3 jeer bishiiba dugsiga oo dhan wuu wada kulmaa si la isu salaamo, la ciyaaro, la heeso, go’aan la gaaro, oo lagu tababaro xirfadaha bulshada. Shaqaalaha wee is la shaqeeyaan si ay qorsheeyaan kulamadaan.
Fasallada lagu lamaaneeyey la wadaago shaqada
Kulanka dhugsiga dhan waxaa dheer, in ay fasal kasta uu leeyahay fasal kale uu lashaqeeyo uu na la wadaago mashruuc ay iskala shaqeeyeen. La wadaaga shaqada waxee dhacadaa dhawr jeer sanad walba si loo siiyo ardayda fursad ay ku soo bandhigaan wixii ay ka shaqeynayeen fasalkooda. Waxay kaloo ka caawisaa si ay dhisan xirfado bandhigid iyo waxay isku xariirisaa ardayda heer fasal oo kala duwan kujiraan oo na lasocodsiisaa waxee ardayda kale sameenaayaan.
Dhismaha bulshada waxee ka dhacadaa banaanka dhismaha iyo sidoo kale gudaha. Bilowga ee sannadka, macalimiintu waxee habeenayaan ciyaaro loogu talagalay ardayda. Caruurta waxee ciyaaraan ciyaaro wada shaqeyn barayso intee tartanka bari laheyd. Waxaan aaminsan nahay in carruurtu u baahan yihiin dhaqdhaqaaqa jirka inta ay cunteyn ka hor, sidaas carruurta waxee ciyaaraan qadada ka hor. Sanad ka markii oo sii socodo ardayda